Naverina tamin’ny toerany indray ilay mpivaro-boanjo Trinidadiana tiam-bahoaka any amin’ny fijerena lalao cricket · Global Voices teny Malagasy
Namantarana ny lalao cricket Karibeana nanomboka tamin'ny taona 1971 i Jumbo.
Voadika ny 03 Oktobra 2019 5:44 GMT
Fifaninanana fohy amin'ny lalao cricket isam-paritra izay atao isan-taona nanomboka ny taona 2013 nyCaribbean Premier League na Ligy Karibeana Voalohany (CPL) . Antsoina mahazatra hoe cricket Twenty20, nanomboka tamin'ny 5 septambra tao amin'ny Kianjan'ny Mpanjakavavy miendrika Oval (boribory lavalava) ao Seranan'i Espaina, renivohitr'i Trinite ny fifaninanana 2019 ary hatao amin'ny 12 Oktobra ny lalao famaranana. Nomena anarana hoe Brian Lara moa ity kianja any atsimon'i Trinite ity, ilay atleta malaza amin'ny lalao cricket – saingy tsy ireo atleta loatra no tena nalaza tamin'ity taona ity fa ilay «Mpivaro-boanjo».
Namaritra ilay lehilahy Mpivaro-boanjo malaza ho “fahita matetika eny amin'ny fivarotan-tsakafo an-dalambe sy any amin'ny hetsika ara-panatanjahantena” ilay bilaogera miresaka momba ny sakafo TriniGourmet :
Anisan'ny manan-danja amin'ny fijerena lalao cricket any Karaiba ireo mpivaro-boanjo. Rehefa mirohotra handeha hijery ny lalao ireo mpankafy cricket na ireo mpijery hafa izay tonga any an-toerana fotsiny mba haka ambiansy dia ny voanjo no mety tsara hanalana ny hanoanan'ny vavony kanefa sady tsy voatery hiala eo amin'ny seza hipetrahana rehefa tonga ny hanoanan'ny olona .
Raha mandeha ny cricket dia i Keith “Jumbo” Martin angamba no Mpivaro-boanjo fanta-daza indrindra — farafaharatsiny ao amin'ny Kianja Oval — izay fantatra amin'ny fahaizany manipy ny haronkely misy voanjo ho an'ireo mpijery miparitaka manerana ny toerana fipetrahana, efa nanomboka tamin'ny taona 1971 no nahitana an'i Jumbo teny amin'ny lalao cricket Karibeana .
Raha vantany vao nanomboka ny fifaninanana CPL 2019 no navoakany ny lahatsary izay niparitaka be tao amin'ny tambajotra sosialy izay nampiseho ny tsy fahafaliany raha nilazana izy fa tsy mahazo mivarotra ny voaniony ao amin'ilay hetsika satria ny Sunshine Snacks izay vondronorinasa eo an-toerana no mpanohana ofisialy.
Nitobaka ny fanohanana azy tao amin'ny tambajotra sosialy, niaraka tamin'ny lahatsoratra sasany niangavy ny Oval mba “hamerina ity olona anisan'ny manamarika ny fijerena lalao crocket ity”.
Nieritreritra ilay mpisera Facebook Rhoda Bharath hoe:
Angamba ny endrika lahatsary YouTube nalefan'i Brian Bartholomew, izay nataon'ny zanany lahy tamin'ny endrika extempo (endrika calypso tsy niomanana) no fanehoana fanohanana tena niavaka indrindra:
Tafita ny hafatra. Efatra andro taorian'ny lalao CPL 2019 voalohany, nanambara ny Sunshine Snacks fa nihemotra amin'ny ampahany ry zareo amin'ny zo hany mahazo mivarotra mba ahafahan'ny mpivaro-boanjo tsy miankina mivarotra ny entany ao amin'ny fifaninanana.
Nanazava ny Tale Mpitantana Kristine Thompson :
Nankasitraka betsaka ny fihetsiky ny orinasa ny mpiseran'ny media sosialy, kanefa tsy ny olon-drehetra akory no nanohana ny paikadin'i Jumbo. Nisy mpisera Facebook sasany nahatsapa tao amin'ny andiana fanehoan-kevitry ny daholobe fa mifanohitra amin'ny sarany aloan'ireo mpanohana ny fomba nataony; ny hafa kosa nanontany raha toa ka nanaraka ny fomba ara-dalàna izay manome azy ny alalana hivarotana ao amin'ny hetsika i Jumbo. Nihevitra ny tompon'andraikitra iray tao amin'ny klioban'ny Lalao Cricket ao amin'ny Kianjan'ny Mpanjakavavy, izay nifampiresaka tamin'ny Global Voices tamin'ny alàlan'ny WhatsApp saingy tsy nitonona anarana fa tokony hisy ny marimaritra iraisana eo amin'ny roa tonta.
Raha namintina izany i Aarti Gosein :